पहाडिने मान्छे, एसबी क्षत्री: नेपालीभाषी बर्मेलीको संघर्ष र सफलताको कथा
एस. बी क्षेत्री र उनकी श्रीमती विद्या
उनको 'बिजनेस कार्ड' मा एसबी क्षत्री लेखिएको थियो।
'बर्मेलीले ज्ञवाली उच्चारण गर्नै जान्दैनन्, त्यसैले क्षत्री लेख्दिएको,' उनले कार्ड मतिर सार्दै भने, 'ज्ञवाली भनेपछि गुल्मीबाटै आएको होला पुर्खा।'
रंगुनको ४० डिग्री उखरमाउलो गर्मी छल्न १७ डिग्रीको उनको वातानाकूलित कोठामा पंखासमेत घुम्दै थियो। म बर्माको पुरानो राजधानी रंगुनमा बस्न थालेको दुई वर्ष भयो। यहाँ तीनवटा मात्र मौसम छन्- गर्मी, अझ गर्मी र दर्के झरीसहितको थप गर्मी।
'म त पहाडिने मान्छे हो नि,' क्षत्रीले मलाई नयाँ शब्द सिकाए।
पहाडिने, अर्थात् पहाडतिर डुली हिँड्न रुचाउने। पहाडिने क्षत्रीलाई चिसै प्यारो। त्यही भएर पनि होला, नेपाल धेरैपटक गएका छन् उनी।
'एभरेस्ट बेस क्याम्प पुगेँ, स्याङ्जाको सिरुबारी गएँ, लमजुङको घलेगाउँ गएँ, पोखरा नजिकको घान्द्रुक पनि गएँ,' नेपाल भ्रमणको वृत्तान्त सुनाएर उनले मलाई सोधे, 'साँच्चै हाम्रो पुर्ख्यौली थलो गुल्मी चाहिँ कस्तो छ, पहाड हो कि तराई? गर्मी ठाउँ हो कि शितल?'
सन् २००८ मा बिम्स्टेक सम्मेलनमा भाग लिने म्यानमारको सरकारी टोलीमा सहभागी भएर पहिलोपटक नेपाल पुगेका रहेछन् क्षत्री। त्यति बेला नेपालका पर्यटन मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली थिए। क्षत्रीले 'हाम्रा बूढाबाबु गुल्मीको हो' भनेपछि 'म पनि गुल्मीको हो, जानुपर्छ' भनेका थिए रे ज्ञवालीले।
क्षत्रीका हजुरबा कमलापति ज्ञवाली नेपालबाट बर्मा आएका हुन्। कमलापतिका चार जना छोरा यतै जन्मिए। तिनका दुई छोरा बेलायती फौजमा भर्ती हुन भारतको दार्जिलिङ गए। गोर्खा रेजिमेन्टमा भर्ती भए र दोस्रो विश्वयुद्ध लड्न बर्मै आइपुगे।
जापानी र बेलायती सैनिकबीचको त्यो युद्धमा बर्माको राजधानी रंगुन ध्वस्त भएको थियो। बर्मामा मात्र करिब १४ हजार मान्छे मारिए, ४४ हजार घाइते भए। चौध हजारभन्दा धेरै हराए। त्यसरी हराउनेमा उनको आमातिरका हजुरबा पनि एक हुन्।
'हजुरआमा १०६ वर्षको उमेरमा बित्नुभयो,' क्षत्रीले १४ वर्षअघि निधन भएकी हजुरआमालाई सम्झँदै भने, 'दोस्रो विश्वयुद्धमा हराएका हजुरबाको ६३ वर्षसम्म बाटो कुरेर बस्नुभयो।'
यहाँ आएका नेपालीले सबभन्दा बढी दुःख त्यही जापानले बर्मा लिएका बेला भोग्नुपर्यो। परिवार छुट्टिए। कति बर्मामै मरे। कति भागेर नेपाल जान खोज्दा बाटोमै बिते। कति हराए, कति भारतसम्म पुगेर उतै बसे। कति भने बल्लतल्ल नेपाल पुगे।
अंग्रेजहरूले बर्मामा शासन गर्दा 'हिल स्टेसन' बनाएको पहाड पि उँ लिनमा सन् १९६० मा जन्म भएको हो, गणेश ज्ञवालीको। एसबी क्षत्रीको न्वारनको नाम यही हो।
एस बी क्षत्री।
रंगुनबाट सात सय किलोमिटर परको उनको जन्मथलोलाई नेपालीभाषीहरू 'पिउँले' भन्छन्। अहिले पनि गर्मी छल्न चाहने बर्मेलीका लागि रोज्जाको पर्यटन गन्तव्य यही हो। नेपालीभाषीले बर्मामा आफू बस्ने ठाउँलाई आफ्नै नाउँ दिएका छन्। पिउँले नजिकका गाउँ हुन्, बरबटे, सिलाङ, झिलबस्ती, नयाँ बस्ती, गोराबारी।
'दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएपछि बाले बिहे गर्नुभएछ। घरबाट करिब दुई सय किलोमिटर परको लासियोमा। मेरी आमा सुरूमा बाबाको साली हुनुहुन्थ्यो। पछि उहाँले सालीलाई पनि ल्याउनुभएछ,' विनोदी स्वभावका क्षत्रीले भने, 'गुन्द्रुक पकाउन पर्दैन, सालीलाई फकाउन पर्दैन। यो उखान पनि नेपालबाटै ल्याएका थिए हाम्रा पुर्खाले।'
'हामी ज्ञवाली भए पनि क्षत्री हुम् है, बाहुनबाट खसेका। हजुरबाले सायद क्षत्रीनी बिहे गरेर होला,' उनले अनुमान लगाए।
उनको परिवारमा जेठी आमातिरका एक भाइ, चार बहिनी गरी पाँच जना र आफ्नै तीन भाइ गरी आठ जना केटाकेटी थिए। उनीहरू दुई आमा र बासँगै सिलाङमा बस्थे।
'बाले फेरि अर्की बिहे गर्नुभयो,' हाम्रो कुराकानी सुनिरहेकी आफ्नी श्रीमती विद्यातर्फ हेर्दै क्षत्रीले बाल्यकाल सम्झिए, 'तीन गुँड भएपछि छुट्टभिन्न भयो। बा कान्छीआमासित सिलाङमै बस्नुभयो। जेठीआमालाई बाले 'पेन्सन' दिनुभयो। जेठीआमा आफ्ना सन्तान लिएर पिउँले सहर जानुभयो। मेरी आमाको भागमा बाको खेतबारी भएको बरबटे पर्यो। हामी तीन छोरा लिएर आमा बरबटे झर्नुभो।'
'अनि तपाईंको पढाइ नि,' मैले सोधेँ।
बर्मामा सन् १९६२ मा सैनिक शासन सुरू भएपछि यहाँको शैक्षिक स्तर खुस्किँदै गयो। पहिले बच्चैदेखि अंग्रेजी सिकाइने भए पनि सैनिक शासनपछि पाँच कक्षाबाट मात्र अंग्रेजी पढाइ सुरू हुन्थ्यो।
क्षत्री बरबटेमा खेतबारी गर्दै हुर्किए। बिहान राँगा जोत्यो, दिउँसो स्कुल गयो। साँझ गोरी गुरूमाको पाउ मिच्न गयो। उनको दैनिकी यस्तै थियो।
बेलायतले सन् १९४८ मा बर्मालाई स्वतन्त्र छाडेर गए पनि केही गोरागोरीहरू उता फर्कन मानेनन्। तिनलाई बर्माको हावापानी र बर्मेली मायाले यतै रोक्यो। तिनैमध्ये एक जना पाको उमेरकी गोरिनी क्षत्री पढ्ने स्कुलकी शिक्षिका थिइन्। उनले सिकाउने अंग्रेजीमा क्षत्रीको मन गढ्यो। पाँच वर्षजति तिनै गोरिनीको खुट्टा मालिस गरेर अंग्रेजी भाषा सिके।
'ती अंग्रेजका सन्तान बस्ने ठाउँलाई नै नेपालीले गोराबारी नाम दिएका होलान् है,' क्षत्रीलाई सोधेँ, 'बेलायत नफर्केका गोरागोरीका कोही-कोही सन्तान अहिले पनि बर्मामा होलान्?'
'छन् छन्,' उनले भने।
बर्मामा गर्नुपर्ने कामको सूचीमा अब अर्को एउटा काम पनि थपियो। बेलायतले छाडेर गए पनि बर्मा नछाडेका गोरागोरीका सन्तान भेट्ने।
'हामी तीन भाइले २४ कक्षा पढेम्,' रौसिए क्षत्री, 'सबै जना आठ, आठ, आठ क्लास। जोड्नुस् त।'
म फिस्सिएँ, फिस्स हाँस्नु के!
'दाजु आठ चढेपछि मोगोक जानुभयो, पत्थर खोज्न,' बर्माका १० प्रतिशतजति नेपालीभाषी रुबी, जेड, सफायर, निलमजस्ता अनेक नामका मणिमाणिक्य खोज्ने र बेच्ने काममा हिँड्छन्। त्यसले केही नेपाली परिवारलाई अर्बपति बनाइदिएको छ भने दर्जनौंलाई करोडपति। सयौं परिवारलाई लखपति र अरू सयौं परिवारलाई सडकपति।
'जसको भाग्य छ, त्यो मात्र चम्किने हो पत्थरमा, हाम्रो दाइको चम्केन,' दाजु मोगोक लागेपछि माइला छोरा क्षत्रीमा परिवारको दायित्व बढ्यो। आमालाई खेतबारी सघाउने र सानो भाइ हुर्काउने।
उनी खोरिया खन्थे। हलो जोत्थे। डल्ला फोर्थे। मकै, धान लगाउँथे। गोड्थे। काट्थे। थन्काउँथे। अर्मपर्म गर्थे। खेताला जान्थे। गोठाला जान्थे। खरले घरगोठ छाउँथे। यस्तै कामको चापले क्षत्रीले आठ कक्षापछि स्कुल छाडिदिए। खेतबारी नै थामेर बसे।
'बस्तीमा दुःख थियो, खानबस्नको हैन,' क्षत्रीले भने, 'पैसा हातै नपर्ने। 'क्यास फ्लो' नै नहुने।'
पैसा हात पार्न राति राति 'सेक्युरिटी गार्ड' को काम गरे उनले। दिनभर बरबटेमा खेतबारी स्याहार्ने, राति पिउँलेमा सेक्युरिटी गार्ड।
पिउँले फूलका लागि प्रसिद्ध छ। बर्मामा जताततै बौद्ध गुम्बा छन्। पुरानो काठमाडौंको भनाइजस्तै, मान्छेभन्दा मूर्ति धेरै, घरभन्दा मन्दिर धेरै। बर्मामा पनि मान्छेभन्दा बुद्धका मूर्ति धेरै छन् र घरभन्दा बौद्ध गुम्बा।
बुद्धलाई फूल चढाउने चलन असाध्यै धेरै छ। हरेक घरमा बुद्धका मूर्ति राखिएकै छन् र तिनमा हरेक दिन नयाँ फूल-पानी चढाउने गर्छन्। गाडीमा पनि फूलै राख्छन्। पसलमा पनि फूलैफूल।
रेल चढेर पिउँलेका फूल बर्माका सबै सहरमा पुग्थे, अझै पुग्छन्।
क्षत्रीले सागसब्जीभन्दा फूलबाट पैसा आउने निधो गरे। सेक्युरिटी गार्डको काम छाडे र लागे बारीमा नगद पार्ने फूल रोप्न- हलान्डिया फूल। त्यो फूलको यति धेरै व्यापार बढ्यो, बीउकै हाहाकार। नजिकका आफन्तले समेत हलान्डियाको बीउ आफन्तलाई नदिने। लुकाएर आफू मात्र लगाउने। क्षत्री फूलको बीउ खोज्दै खोज्दै ठूला सहरसम्म पुगे।
बाह्रै महिना पानी लाग्ने बारी छँदै थियो। जति पनि काम गर्ने जाँगर छँदै थियो। हातहातै पैसा पर्ने फूल लगाएपछि केही वर्षमै पिउँलेमा फूलको नम्बरी किसान भए, क्षत्री।
त्यसपछि उनले मोगोकबाट दाइलाई बोलाए। दाइको बिहे भयो। जन बढ्यो। बारीमा पसिना बढी बगे। अनि बढ्यो फूलको उत्पादन र व्यापार।
क्षत्रीलाई अंग्रेजी सिक्ने धुनले छाडेको थिएन। गोराका कोही न कोही सन्तानसित हरेक साँझ पिउँले पुगेर अंग्रेजी सिकिरहन्थे।
उनले २३ वर्षको उमेरसम्म फूलको खेतीपाती गरे। पैसा पनि भयो। फूल खेतीमै लाग्दा क्षत्रीले थाहा पाए किसानभन्दा हुनुपर्ने त व्यापारी रहेछ। पैसाको तराजु जहिले उस्कैमा धेरै जो ढल्किन्छ।
बस्तीमा हलो जोत्दा तालु माथिबाट हवाइजहाज उडेर गएको उनी देख्थे। मुन्टो बटारेर जहाज हेर्दै सोच्थे, 'यो जहाज जहाँ गएर ओर्लन्छ, त्यही ठाउँमा भविष्य खोज्न जाने हो म पनि।'
दाइभाउजू खेतीपाती गर्न सक्ने थिए। सघाउने आमा र भाइ थिए। गाउँको जिम्मा उनीहरूलाई छाडेर क्षत्री सहर छिरे, त्यो बेलाको राजधानी, रंगुन।
सुरूमा उनले गाडी चलाउन सिके। बर्मेली पाराको समाजवादी सरकारले त्यो बेला विदेशबाट नयाँ गाडी ल्याउन दिन्थेन। पुराना गाडी बिग्रिरहन्थे। मेकानिकको राम्रै माग थियो। यही देखेर उनी मेकानिक भए।
गाउँबाट ल्याएको पैसाले सहरमा कति पो थेग्थ्यो र? लाखौं मान्छेले हजार तरिकाले पैसा तान्ने बल्छी थापिरहेका हुन्छन् सहरमा। घरबाट ल्याएको पैसा सकिन थालेपछि एक छाक मात्र भात खान थाले उनले।
भात दोकानदारले उनको यो मर्का बुझेछ। निश्चित पैसा तिरेपछि दिउँसो दुई घन्टासम्म जति खाए पनि दिने भयो।
क्षत्रीले जुक्ति निकालेर एकदेखि तीन बजेसम्म खान थाले। यसो गर्दा बिहानको र साँझको छाक एकैचोटिमा टर्थ्यो। यस्तो अवस्थामा उनले घर फर्केर पैसा मागेनन्, 'स्वाभिमान' भन्ने चिज जो थियो।
उनी सहर पुगेपछि जहाज झर्ने विमानस्थल गइरहन थाले। कहिलेकाहीँ गोराहरू भेट्न रेल्वे स्टेसन पनि जान्थे। अलमल परेका गोरासँग एयरपोर्ट र रेल्वे स्टेसनमा अंग्रेजी बोल्थे। कसैलाई ट्याक्सी मिलाइदिन्थे, कसैलाई होटल। कसैलाई सहर घुमाइदिन्थे, कतिलाई पैसा साट्न मद्दत गर्थे।
समाजवादी सरकारले विदेशी चुरोट र मदिरामा बन्देज गरेको थियो। तर खाने मान्छेको कहाँ कमी थियो र? पर्यटकले ल्याएका एक बोतल ह्विस्की बेच्दा ८-१० डलर कमाई हुन्थ्यो।
रंगुनमा पनि विस्तारै पैसा फल्न थाल्यो। यही क्रममा सन् १९८७ को कुनै एकदिन क्षत्री गोरालाई पुर्याउन विमानस्थल गएका थिए। बंगलादेशको जहाज बेलामा आएन। जहाजका कर्मचारी, होटल फर्किन चाहने पर्यटक र ट्याक्सी ड्राइभर सब एकअर्कासँग भाषा नबुझेरै बाझाबाझ गरिरहेका रहेछन्। क्षत्रीको अंग्रेजी भाषाले त्यहाँ कमाल गरिदियो। उनले गरेको मध्यस्थतामा सबै जनाको चित्त बुझ्यो।
एकाधिकार गरिरहेका 'एयरपोर्ट ट्याक्सी'वालाहरूले क्षत्रीको भाषा दख्खल देखेर प्रस्ताव गरे, 'तिमीले चाहे एउटा गाडी किनेर हाम्रो समितिमा छिराऊ। हाम्लाई भाषाको अलमल पर्दा सहयोग गर। गाडी बरू हामी सस्तैमा मिलाइदिन्छौं।'
उनी घर गए। फूल बेचेर जम्मा पारेको पैसा धुरीखम्बा खोपेर लुकाइएको थियो। त्यति बेलाको ५० हजार च्याट रहेछ। त्यही सोहोरेर रंगुन आए। गाडी किने। आफ्नै ट्याक्सीमा पर्यटकलाई होटल पुर्याइदिने, सहर घुमाइदिने र लामो दुरी लगिदिने गर्न थाले।
जिन्दगीले रंगुनमा पनि रफ्तार लियो।
गाडी किनेको तीन महिनामै सरकारले रंगुनमा ३० वर्ष पुराना गाडी चलाउन नपाइने नियम ल्याइदियो। क्षेत्रीको सपना र आम्दानीमा ब्रेक लाग्यो। उनले रंगुनबाहिर लगेर आधा दाममा गाडी बेचे।
गाडी बेचेको १० दिनमै समाजवादी सरकारले नयाँ नियम ल्यायो। पुराना २५, ३५ र ७५ दरका बैंक नोट नचल्ने। उनीसँग गाडी किन्नेले तिनै दरका नोट दिएको थियो।
यस्तै गर्थ्यो, बर्माको सैनिक सरकार। त्यसअघि पनि 'बर्मेली मूलको समाजवादी बाटो' भन्दै दुईपटक आममानिससँग भएका बैंक नोट नचल्ने बनाइदिएर सबैलाई बराबरीमा झारेको थियो। उक्त निर्णयपछि थुप्रै भारतीय र चिनियाँ व्यापारी आफ्नै देश फर्केका थिए।
उता, पिउँलेमा फूलका बिरुवामा विकासे कीरा लाग्न थाले। फूलको व्यापार घरखर्च चलाउन पनि धौधौ हुने गरी बिग्रिँदै गयो।
'अरे यार मान्छे, म शून्यमा झरेँ,' क्षत्री मज्जाले हाँसे, 'जानेको टुरिस्ट गाइडको काम थियो। त्यही गरेर गुजारा चलाएँ।'
त्यति बेला नेपालमा 'पिसकोर' स्वयंसेवक भएर अमेरिका फर्केका जोडीले स्थापना गरेको टुर कम्पनी 'जर्निज एड्भेन्चर्स ट्राभल'ले नेपालमा पर्यटक पठाइरहेको थियो। पर्यावरणमैत्री र सामुदायिक पर्यटनका लागि प्रसिद्ध 'जर्निज ट्राभल' ले बर्मामा पनि पर्यटक पठाउने भएछ। बर्मा घुमेर गएका कुनै पर्यटकले अंग्रेजी भाषामा पोख्त क्षत्रीको नाउँ 'जर्निज ट्राभल' लाई सिफारिस गरिदिएछन्।
'जर्निज'ले समूह-समूहमा पर्यटक पठाउन थाल्यो। तिनलाई बर्मा घुमाउने जिम्मा क्षत्रीको थियो। उनले विमानस्थलनजिकै डेरा लिए र अघोषित 'ट्राभल एजेन्ट' भए। यी सबै कामका लागि 'गाइड लाइसेन्स' चाहिन्थ्यो, जुन उनीसँग थिएन।
एसबी क्षत्रीको होटलमा विदेशी पर्यटकहरू।
पर्यटन व्यवसायी एसबी क्षत्री पर्यटकलाई यसरी हलो जोत्ने अनुभव पनि गराउँछन्।
क्षत्रीलाई कुन दिन कसले सरकारमा सुट्के लाइदेला भन्ने पीर परिरहेको बेला थियो। नेपाली मूलका सैनिक कर्नेल टंकध्वज नेपाललाई सरकारले पर्यटन विभाग प्रमुख बनाएर पठायो। खासमा टंकध्वज नेपाल सेनामै माथि जान सक्थे। बर्मेली नभएकै कारण उनी सरकारी कोपभाजनमा परेर पर्यटन विभाग आइपुगेका थिए।
उनको सरुवा क्षेत्रीका लागि भने गाइड लाइसेन्स पाउने बाटो बन्यो।
'गुहार माग्न गएँ। गुरुबा! म गोरा घुमाउने गर्छु। सरकारी कागज छैन। गाइडमा रेकमेन्डसेन गरिदिनुपर्यो,' क्षत्रीले बिन्ती बिसाए।
बर्मामा सैनिकको बोली नै कानुन हुन्थ्यो। क्षत्री लाइसन्सवाला टुरिस्ट गाइड बने। उनको जीवनले फेरि रफ्तार लिन सुरू गर्यो। अफिस खोले। आमा र दाजुको परिवारलाई रंगुन बोलाए।
पर्यटन फाप्दै थियो। यसैबीच सन् १९८८ मा बर्मामा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन चर्कियो। हजारभन्दा बढी मान्छे मारिए। सेनाले प्रजातान्त्रिक आन्दोलन दबायो। पश्चिमा देशले आफ्ना नागरिकलाई बर्मा नजान सल्लाह दिए। पर्यटक आउन छाडे। क्षत्रीको व्यवसाय डुब्यो।
'फेरि शून्यमा झरियो,' क्षेत्रीले थपे, 'बाँच्न त पर्यो।'
उबेला समाजवादी सरकारले एक दिनमा एउटा गाडीलाई २४ लिटर मात्र इन्धन उपलब्ध गराउँथ्यो। मान्छे दिनभर पेट्रोलपम्पका अगाडि गाडी राख्थे। इन्धनको कालोबजारी थियो।
क्षत्रीले जुक्ति निकाले। लाइनमा बस्न नचाहने ठूलाबडाका गाडीलाई पेट्रोलपम्पको लाइनमा राखिदियो। दिनभर घस्रिएपछि पाइने तेल भाग लगायो, साहुलाई आधा आफूलाई आधा। आफ्नो भागको तेल उनी कालो बजारमा बेच्थे।
दुःख परे पनि क्षत्रीले अंग्रेजी सिक्न भने छाडेनन्। त्यही बेला भर्खरभर्खर बर्मामा आएको कम्प्युटर र हिसाबकिताब राख्न 'बुक किपिङ' पनि सिके। आफ्नो सीप बढाउनुपर्छ भन्ने निकै ख्याल थियो उनलाई।
बर्मामा अनेक प्राकृतिक स्रोतमा इन्धन प्रमुख छ। सन् १९९० को सुरू-सुरूमा संसारका नाम चलेका ठूल्ठूला पेट्रोल कम्पनी उत्खनन् गर्न आए। 'हेलिकप्टर लिएर गाउँ-गाउँ, जंगल-जंगल गएर सर्वे गर्थे,' क्षेत्रीले ती दिन सम्झिए।
क्षत्रीको एयरपोर्ट जाने क्रम छुटेको थिएन। अंग्रेजी जानेको मान्छे पाउनै मुश्किल बेला थियो। क्षत्रीलाई पेट्रोल उत्खनन् गर्ने एउटा कम्पनीका व्यवस्थापकले छाड्दै छाडेन। उनी त्यहाँ दोभाषे भए। आवश्यक सरकारी कागजपत्र मिलाइदिन थाले।
गाडी चलाउने, बिग्रे बनाउने, पर्यटनको अनुभव भएको, अंग्रेजी जानेको, सरकारी कागजपत्र मिलाइदिन सक्ने उनको सीप देखेका विदेशीले बुझे, 'क्षत्री भयो भने काम सजिलो हुन्छ।'
न्वारनको नाम गणेशलाई परिवर्तन गरेर क्षत्रीका बुबाले स्कुल पढ्ने बेला राखिदिएको 'सीपबहादुर' नामको यहाँ काम आयो।
मेसिनरीमा रूचि भएका क्षत्रीले हेलिकप्टरका पार्टपुर्जाबारे केही दिनमै चाल पाइहाले। पहिलो महिनाको तलब भनेर कम्पनीले दियो, दुई हजार अमेरिकी डलर। रन्थनिए, क्षत्री। चिमोटे आफैंलाई।
त्यसपछि कम्पनीले दियो, घर। सेक्रेटरी। गाडी। ड्राइभर।
हवाइ उड्डयनमा त रेडियोमार्फत् सञ्चार गर्नुपर्ने। त्यो पनि क्षत्रीले टिपिहाले। त्यसमा पनि सामान्य बिग्रिए, बनाउन सक्ने भए। छ महिनाभित्र उनी आफ्नै सीपको बलमा 'असिस्टेन्ट म्यानेजर' भए। सातवटा हेलिकप्टरका मुख्य हर्ताकर्ता।
उनी गोराको संगतमा गल्फ मैदान पनि जान थाले। गल्फ खेल्न सिके।
'बर्मामा टिक्ने हो भने गल्फ खेल्नुपर्छ, जर्नेलहरू त्यहीँ हुन्छन्। शासन सत्ताको बागडोर तिनैसँग छ। सब सूचना गल्फ कोर्समै पाइन्छ,' राष्ट्रसंघका एक पूर्व हाकिमले मलाई भनेको सम्झेँ।
गोरालाई संगत दिन उनले साँझका 'पार्टी ज्वाइन' गर्नुपर्यो। 'वाइन पिउन सिकेँ, चिज खान सिकेँ,' क्षत्रीले सुनाए।
सेनाका गल्फकोर्स, अमेरिकन र ब्रिटिस क्लबको पेय, अनि हेलिकप्टरको व्यवसाय- क्षत्रीको पहुँच, उठबस, खानपिन, कुराकानी सबै सत्ता नजिककासँग हुन थाल्यो।
सन् १९९२ मा फेरि पर्यटनका लागि बर्मा खुल्यो। क्षत्रीले ट्राभल कम्पनी खोले। 'पहाडिने मान्छे, एड्भेन्चर टुरिजममा मन,' क्षत्रीले सुनाए, 'राम्रा र बलिया गाडी किनेँ, अनि लागेँ गोराहरूसँग पहाड घुम्न।'
बर्मामा त्यो समय गाडी किन्न कि सेनाको जर्नेल हुनुपर्थ्यो कि राजदूत कि तिनको विश्वास जितेको बर्मेली।
सन् १९९० को चुनावमा विजयी भएर पनि आङ साङ सू चीको पार्टीलाई सत्ता हस्तान्तरण नगरेको भन्दै बर्मेली सेनाको युरोपेली र अमेरिकी संसदमा विरोध भयो। बर्मामाथि नाकाबन्दीका कारण बर्मामा लगानी गरेका त्यताका कम्पनीहरू फिर्ता जाने भए। उनको हेलिकप्टर पनि युरोप फर्कियो।
क्षत्रीले अब फेरि शून्यमा झरेँ भन्छन् कि भनेको भनेनन्, 'जागिर गयो, तर आफ्नै टुरिजम् बिजनेस चलिरह्यो।'
उनले अब रंगुनमा जग्गा किन्न थाले। घर बनाउन थाले। सुखका दिनसँगै सबै परिवार पिउँलेबाट रंगुन आए।
'बिहेको कुरै निकाल्नुहुन्न त,' जिस्काउने पाराले सोधेँ।
'स्पष्ट थिएँ म,' क्षत्रीले जवाफ फर्काए, 'कि कामियाब भएर मनपरेकी बूढी बिहे गर्छु, सकिएन भने धनीकी छोरी बिहे गर्छु। त्यसैको गुलामी गरेर बस्छु।'
मोगोक नेपालीभाषीको सबभन्दा बाक्लो बस्ती भएको म्यानमारी सहर हो। मोगोकका पत्थर व्यापारी यामबहादुर पोख्रेलकी छोरी विद्या भारतको बम्बईमा 'टुरिजम' पढ्थिन। बर्माको 'रुबी'लाई बम्बई लगेर बेच्ने र बम्बईको 'हिरा' बर्मा ल्याएर बेच्ने गर्दा केही भारतीय र बर्मेली धनी पत्थर व्यापारीबीच पारिवारिक सम्बन्ध छ।
साथीभाइको सुरमा विद्यालाई भेट्न क्षत्री बम्बई पुगे। मनपराए। पर्यटनमा लागेका क्षत्रीलाई 'टुरिजम' पढेकी जोडा मिल्यो।
सन् १९९५ मा उनीहरूले बिहे गरे।
एस बी क्षत्री र श्रीमती विद्या।
बिहेपछि क्षत्री पर्यटन व्यवसायमै लागे भने विद्या हिरा व्यापारमा लागिन्। पत्थरको व्यापार विश्वासमा अडेको हुन्छ। खास ग्राहक को हो, पत्तै हुँदैन।
सन् १९९७ को एकदिन बर्मेली बिचौलियाले विद्याबाट दुई करोड च्याटको हिरा लिइन्, 'ग्राहक राम्रो छ, किन्छ' भन्दै। तर न पैसा दिइन्, न सामान फर्काइन्।'
'आफूलाई अरूले धोका दिए पनि आफूले अरूलाई धोका दिन भएन। अपार्टमेन्ट बेचेँ। पाँचवटा गाडी बेचेँ। घडेरी बेचेँ। भएका सम्पत्ति सबै सकेर ऋण तिरेँ,' क्षत्रीले बल्ल यसपालि भने, 'यार! अनि फेरि झरेँ शून्यमा।'
क्षत्रीसँगैको सोफामा बसेकी विद्यालाई भने दुई करोडको नोक्सानले धेरै कुरा सिकायो। २२ दिने छोरा च्यापेर सुत्केरी विद्या ती बिचौलिया महिलाको पछि लागिन्। पैसा उठ्ने छाँट नदेखेपछि अदालत गइन्।
'अदालतको भाषा जानेँ। कानुन जानेँ,' विद्याले थपिन्, 'कसरी कमाउने र कसरी ऋण तिर्ने भनेर अनेक उपाय निकाल्न बाध्य भइयो।'
सन् १९९६ म्यानमार भ्रमण वर्ष - क्षत्री पर्यटक बोलाउन युरोप, अमेरिका जान थाले। विद्या काखेछोरा च्यापेर हिराकै व्यापारमा लागिन्।
हिराले पुर्‍याएको क्षति हिरा व्यापारबाटै सन् २०१३ मा पूर्ति भयो। त्यसपछि विद्याले त्यो कारोबार छाडिन्। क्षत्री भने पर्यटन व्यवसायमा लागिरहे।
उनी सन् २००७ मा होटल खोल्न पुटाओ पुगे। पुटाओ बर्माको एक मात्र हिउँ पर्ने पहाड हो। त्यहीँबाट हिन्दकुश हिमालय क्षेत्र सुरू हुन्छ। बर्मामा पनि ट्रेकिङ रुट छन्, हिउँले ढाकिएका पहाड छन्, तिनमा चढ्न सकिन्छ भनेर विदेशी र बर्मेलीलाई थाहा दिए क्षत्रीले।
उता उनको ट्राभल कम्पनीसँग अस्ट्रेलियाली कम्पनीले साझेदारी गर्न चाह्यो। उनले ४० प्रतिशत शेयर आफूसँग राखेर अस्ट्रेलियाली कम्पनीलाई ट्राभल चलाउन दिए। समूहका समूह पर्यटक ल्याएर कम्पनीले नाफा गर्दै गयो। त्यसको हिस्सा क्षत्रीले पाउँदै गए। जीवनमा फेरि बहार आयो।
क्षत्रीको रूचि वातावरणमैत्री र दीगो पर्यटनमा हो। 'सफा तातो खाना, आरामदायी बिछ्यौना र नुहाउँदा चिसो, तातो पानी अनि सफा शौचालय, त्यत्ति मात्र गर्ने हो पर्यटकका लागि, अरू वरिपरिको वातावरण केही मास्नु-बिगार्नु हुँदैन,' क्षत्रीले पर्यटनको मन्त्र सिकाए।
'यही टुरिजम सिक्न म नेपाल गइरहेँ,' म्यानमारको पर्यटन मन्त्रालयका सल्लाहकार क्षत्रीको अनुहार खुसी र सन्तोषले मुजा पर्यो।
सन् २०१४ मा कलाउ भन्ने पहाडी ठाउँमा उनी अर्को होटल खोल्न पुगे। नेपालीभाषीको बाक्लो बस्ती भएको कलाउको पहाडले नेपाली पहाडकै झल्को दिन्छ। होटलमा लगानी गर्दै जाँदा ६० लाख अमेरिकी डलर खर्च भयो। आफूले मात्र धान्न सकिन्न होला भन्ने भएपछि नेपालीभाषी अन्य दुई जना रुबी व्यापारीलाई साझेदार बनाए।
तीस एकडमा फैलिएको होटलको क्षेत्रभित्रै गाउँले बस्ती बसाए। खेतबारी जोत्न खन्न मिल्ने बनाए। गाई, गोरु, भैंसी, बाख्रा पाले। अर्गानिक फार्मिङ गरे। अहिले त्यहाँ जाने पर्यटकले मौसमअनुसार किसानको जीवन बाँच्न पाउँछन्। गोरु लगाएर जोत्छन्। धान रोप्छन्। साग गोड्छन्, मकै भाँच्छन्।तिनैले टिपेका तरकारी, तिनैले मारेका कुखुरा पर्यटकलाई खुवाउँछन्। पर्यटक दंग, उनी पनि।
'अब त्यहाँ घोडा राख्ने तबेला बनाउँदै छु,' क्षत्रीले नयाँ योजना सुनाए, 'पहिले पहिले हाम्रा पुर्खा पहाडमा घोडामा यात्रा गर्थे। अंग्रेज शासनकालमा गोराहरू घोडा चढेरै त्यो कलाउको बाटो हिँड्ने रहेछन्।'
क्षत्री दम्पतीले दुई वर्षअघि बर्माकै सबभन्दा धेरै पर्यटक पुग्ने इन्ले ताल किनारमा फेरि अर्को होटल खोले। कलाउबाट दुई-तीनदिने 'ट्रेकिङ' गरेर इन्ले तालमा झरे पनि भयो। इन्लेबाट उक्लँदै कलाउ पुगे पनि भयो।
अर्को होटल खोल्ने सुरमा लागेका क्षत्रीले पिउँलेबाट लाश्यो जाने सडकमा नेपालीको बस्ती भएकै पहाडी ठाउँमा जग्गा किनिसकेका छन्।
'त्यहाँ जातीय अधिकारका लागि लडिरहेका सशस्त्र विद्रोहीले बेलाबेला आक्रमण गर्ने भएकाले अहिल्यै होटल खोल्न मिल्दैन,' क्षत्रीले सुनाए, 'त्यो ठाउँमा भविष्यमा होटल बनाउँदा हरियाली होस् भनेर रूखबिरुवा हुर्काइरहेका छौं। एकदिन त विद्रोह सकिएला अनि वातावरणमैत्री होटल खोल्ने हो।'
क्षत्रीका अरू योजना पनि छन्। बर्माका उत्तरी पहाडमा संसारकै उत्कृष्ट साहसिक कार, मोटरसाइकल र साइकलमा 'अफरोड ड्राइभिङ र बाइकिङ' रुटहरू बनाउने। बर्माकै पहिलो जीप लाइनिङ र बन्जी जम्पिङ स्थलहरू बनाउने, रक क्लाइम्बिङ र प्याराग्लाइडिङका लागि डाँडाहरू खोज्ने।
उनले भनेका साहसिक पर्यटनको फेहरिस्त दोहर्याएर पढ्दा पो थाहा भयो, करिब दुई हजार किलोमिटर सामुद्रिक किनारा भएको देश म्यानमारमा जन्मेर पनि उनको कुनै योजना समुद्रसँग जोडिएको छैन। सबै पहाडी भूभागसँग जोडिएको छ।
साँच्चै 'पहाडिने' क्षत्री।
(पहिलोपटक सेतोपाटी अनलाइनमा प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक ६, २०७६)
नन्दुसँग बर्मेली महिलाका कुरा
'बा बिरामी हुनुहुन्थ्यो। आमा ‘पर सरेका’ ले हामी आठदेखि १२ वर्षका केटाकेटीले खाना पकाएर बाआमालाई दिन्थ्यौं। हाम्ले खान्थ्यौं। बिरामी बा एक दिउँसो घरमा ढल्नुभयो। म सानै थिएँ। आमालाई बोलाएँ। आमा बाको नजिक आउनुभयो। तर, बालाई छुँदै छुनुभएन। ‘छुई’ भएका बेला पुरुषलाई छुनुहुन्न भन्ने धारणा उहाँको मनमा गडेको थियो। बा त्यही दुर्घटनापछि बितेर जानुभयो।'
'गोर्खाली सेलिब्रेटी' खोज्ने धुनमा फेला परेकी हुन् नन्दु ज्ञवाली।
प्रसिद्ध महिलावादी लेखिका दिची चीमामान्ता ङोजीको 'वी शुड अल बी फेमिनिस्ट' (हामी सबै नारीवादी हुनुपर्छ) किताब नन्दुले अनुवाद गरेकी थिइन्। त्यसै अवसरमा डिभिबी च्यानलले अंग्रेजी संस्करणको वेबसाइटमा नन्दुको अन्तर्वार्ता राखेको थियो।
अन्तर्वार्ता पढेपछि मैले नन्दुलाई फेसबुकमा खोजेँ। म्यासेन्जरमा सन्देश पठाएँ, ‘म नेपाली पत्रकार। तपाईंसँग कुरा गर्न समय चाहन्छु।’
उनले दुई साताको प्रतीक्षापछि जवाफ फर्काइन्, 'म अहिले 'योनीका कथाहरू' (भजाइना मनोलग) लाई पहिलोपटक बर्मामा प्रस्तुत गर्ने काममा व्यस्त छु। तपाईंलाई फुर्सद भए शनिबार कार्यक्रम हेर्न आउनू। त्यहीँ भेटौं।'
म उनले भनेको समय र स्थानमा पुगेँ। ‘हल’ भरिइसक्यो भनेर त्यहाँका स्वयंसेवकले भित्र छिर्न दिएनन्। नन्दुको न फोन उठ्यो, न फेसबुक म्यासेन्जरमा जवाफ आयो।
त्यसको भोलिपल्ट नन्दुले माफी माग्दै जवाफ फर्काइन्, ‘अब छिट्टै भेट्नुपर्छ।’
त्यो साताभर बर्माका अंग्रेजी र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा 'भजाइना मनोलग' कार्यक्रम पहिलोपटक प्रस्तुत भएको समाचार थियो। म काम गर्ने संस्था बिबिसीमा पनि नन्दुको अन्तर्वार्ता आयो। मैले भने अझ भेट्न पाएको होइन।
‘मलाई भात खुवाउने त ट्रान्सलेसनको कामले हो नि। विभिन्न संस्थाको कार्यक्रममा गएर बर्मेली-अंग्रेजी वा अंग्रेजी-बर्मेलीमा अनुवाद गर्छु,’ व्यस्तताबारे म्यासेन्जरमा जवाफ फर्काउँथिन्, ‘हरेकपटक भाषण गर्न मात्र हिँडेकी हैन है।’
झन्डै छ महिनापछि, गत भदौमा बल्ल नन्दुसँग भेट्ने मौका जुर्‍यो।
मैले 'किन महिलावादी भएको' भन्दै कुराकानी सुरु गरेँ।
उनले परिवारमा भएको दुर्घटना सम्झँदै भनेकी थिइन्, ‘आमा छुई भएको दुई दिन भएको थियो। महिनावारी बेला पतिलाई छोए पतिको आयु घट्छ भन्ने आस्थाका कारण आमाले बिरामी बालाई छुनुभएन।’
अहिले नन्दुकी आमालाई पछुतो छ। मुर्छा परेका बालाई धर्मराउनेबित्तिकै लड्न नदिएकी भए वा लड्नासाथ आमाले तत्काल बोकेर उपचारका लागि दौडाएकी भए, बा बाँच्नु पो हुन्थ्यो कि?
त्यो घटनाले नन्दुलाई पोलिरह्यो। उनले महिला र पुरुषबीच फरक खोज्न थालिन्।
बौद्धमार्गी देश बर्माका सबैजसो गुम्बामा बुद्धको मूर्ति नजिकै जाने अनुमति पुरुषलाई मात्र छ। हिन्दु महिलाले महिनावारी बेला भोग्नुपर्ने विभेद त कति कति। ‘पर सर्ने’, ‘छुई हुने’ यस्ता चलन बर्मेली नेपालीले आफूसँगै नेपालबाट लिएर आएका हुन्।
‘फेमिनस्ट आर मेड, नट बर्न – महिलावादी बन्ने हुन्, जन्मँदै हुने होइन,’ नन्दुले मलाई व्याख्या गरिरहेकी थिइन्।
'हामीलाई सानैदेखि विभेद हुन्छ। आमाले मलाई छिटो उठाउनु हुन्थ्यो। छोरी भएर यस बेलासम्म सुत्ने हो भन्दै। मेरा दाइभाइलाई त कहिल्यै त्यसो नभन्ने,' नन्दुले विभेद पत्तो पाइहालिन्।
‘भोलि बुहारी भएर गएपछि यसले कसरी गरेर खाली,’ नन्दुले अरू महिलाले भन्दा फरक त केही सुनेकी होइनन्, ‘खाना पकाउने पनि ढंग छैन, बढार्न जानेकी छैन, बिहान अबेलासम्म सुत्छे।’
उनका दाजुभाइले खाना पकाउन, बढार्न, सिलाउन नजानेको, भाँडा माझ्न अल्छी मानेको, सिंगारपटार नगरेकोमा कहिल्यै गाली खानु परेन। स्कुलमा पनि त्यस्तै हुन्थ्यो। कुन काम केटाले गर्ने, कुन काम केटीले गर्ने।
धेरैलाई त यी कुरा सुन्ने यस्तरी बानी परेको हुन्छ, उनीहरूलाई विभेद भएको पत्तै हुँदैन। सामान्य लाग्छ। एअरपोर्ट नजिक घर भएकाले जहाज उडेको र बसेको आवाज वास्ता गर्न छाडेजस्तो।
नन्दुलाई लाग्यो, महिलाका लागि यो संसार राम्रो छैन। त्यसपछि चित्त नबुझेका कुरा फेसबुकमा लेख्न थालिन्। फेसबुकमा धेरै साथी बर्मेली नेपाली थिए। समस्या आइलाग्यो। उनका लक्षित पाठक आमाबाहरूसम्म त्यो नपुग्ने। कतिपय नेपालीलाई बर्मेली भाषा पढ्न, लेख्न आउँदैन।
मोबाइलमा नेपाली भाषामा लेख्न उनलाई नआउने। अनि निस्क्यो, छोटा भिडियो। उनले बर्मेली र नेपाली भाषामा महिलामाथि हुने विभेदबारे प्रश्न गर्दै थुप्रै छोटा भिडियो बनाएर फेसबुकमा अपलोड गर्न थालिन्। कति भिडियो हजारौं र कति लाखौंपटक हेरिएका छन्।
भिडियो बनाएपछि बुझ्न, बुझाउन दुवै सजिलो र प्रभावकारी पनि। सुरुमा उनले त्यही ‘छुई’ बारे भिडियो बनाइन्। प्रतिक्रिया आइहाल्यो, ‘आफूले नबारे पनि अरूलाई भाषण छाँट्दै किन हिँड्न परो?’
प्रश्न नन्दुलाई मात्र होइन उनकी आमालाई पनि सोध्न थालियो।
बर्मेली महिला महिनावारी बार्दैनन्। बर्मेली नेपाली परिवारमा भने अझै छोइछितो उस्तै छ। नन्दुलाई रंगुन र मान्डलेजस्ता ठूला सहरका नेपालीभाषीका घरमा महिनावारी हुँदा बार्ने चलन घटेको हो कि जस्तो लाग्छ। तर, दुई-चार दिन गोर्खालीको घरमा बस्यो भने फेरि उस्तै देख्छिन्।
बर्मेली नेपाली गाउँका त के कुरा गर्नु!
‘म पहिलोपटक महिनावारी हुँदा छिमेकीको घरमा गएर बस्नु पर्‍यो। चलनै त्यस्तो। घरका पुरुषले कहीँ कतै देखिहाल्लान् कि भनेर। सूर्य अस्ताएपछि र नउदाउँदा मात्रै घरबाहिर दिसापिसाब गर्न निस्कन दिइन्थ्यो। मन लागेजति पानी खान पाइनँ। अँध्यारो कोठामा, पुरानो गुन्द्रीमा सुत्न पर्‍यो। खानामा न दूध हुन्थ्यो न तागतिला कुरा,’ नन्दुले विगत सम्झिइन्।
महिनावारी हुँदा मान्छे त के जनावर, रुख-विरुवा छोए त्यो पनि अपवित्र हुन्छ भनेर विश्वास गर्नेमध्येकै थियो उनको परिवार पनि। अहिले परिवर्तन भएको छ। उनले आमालाई बुझाउन सकिन्। महिनावारी प्राकृतिक कुरा हो। यसमा सफासुग्घर बस्ने हो। बार्न पर्ने कुरा केही छैन।
‘फेमिनिस्ट चाहिँ कसरी बन्नुभयो त?’ मैले फेरि सोधेँ।
उनले मलाई बोलाएको रंगुनको शान रेस्टुरेन्टमा मेरो एक जना बर्मेली साथी पनि सँगै थियो।
'म फेमिनिस्ट भेट्न जाँदैछु नि' भन्ने बित्तिकै उसले ‘तिनीहरू व्यवहारिक हुन्नन्’ भनेर ट्याक्सीमै मलाई अनेकौं तर्क सुनाइरहेको थियो।
‘महिलालाई समान न्याय नभएको हाम्रो देश, समाज र घरको वातावरणले मलाई त्यस्तो बनायो,’ नाकमा नत्था, लामो कपाल अनि छोटो स्कर्ट लगाएकी नन्दुले फेरि दोहोर्‍याइन्, ‘आमाले खाली दाइभाइलाई फेभर गर्ने। घरव्यवहारको कुरामा त हामी दिदीबहिनीको कुरै नसुन्ने। घरको खर्च-आम्दानीका सबै निर्णय दाइभाइले मात्र गर्ने।’
उनले मलाई सम्झाउन थालिन्, ‘त्यसमा आमाबाको गल्ती होइन है। उहाँहरू त्यस्तै वातावरणमा हुर्कनुभयो। त्यही सिक्नुभयो। अहिले त आमाले घरायसी निर्णय गर्ने जिम्मा दाइभाइलाई भन्दा मलाई बढी दिनुहुन्छ।’
आमा परिवर्तन भए त राम्रै हो। तर, नन्दुका दाइभाइ अहिले काम गर्न थाइल्यान्ड गएका छन्। त्यसैले पो हो कि? मैले मनमनै सोचेँ।
‘फेमिनिस्ट मात्र होइन। तपाईं त फेमिनिस्ट लेखक पनि। त्यो कसरी हुनुभयो,’ हेर्दा चाउमिनजस्तो देखिने शान खाना ‘खाउसे’ लाई जानी-नजानी चपस्टिकले बेर्दै मैले सोधेँ।
‘घरमा किताब पढ्ने वातावरण थियो। बाआमा निकै पुस्तक पढ्ने। त्यस्तो हुँदा अन्तबाट पनि किताबै उपहार आउने। अंग्रेजी किताबहरू पनि उपहार आउँथे। त्यो पनि पढ्ने। त्यसले मेरो अंग्रेजी राम्रो हुँदै गयो। अनि लेख्न पनि मन लाग्न थाल्यो,’ नन्दु पहिला धेरै कविता लेख्दी रहिछन्।
मैले पनि उनको एउटा कविता पढेको थिएँ, ‘हो, म महिला हो र मेरो रगत बग्छ। हरेक महिना रगत बग्छ’ शीर्षकको।
अहिले भने अनुवादमा उनको रस बसेको छ। ‘ट्रान्सलेसन पनि आर्ट वर्क हो- अनुवाद पनि कला हो,’ नन्दुले मलाई बुझाइरहेकी थिइन्।
‘महिला र पुरुषका लागि किन संसार एउटै छैन भन्ने नै लेख्छु, बोल्छु र अनुवाद गर्छु,’ नन्दुले बर्मेली भाषामा मेरो साथीलाई पनि बुझाइन्, ‘हामीले चाहेको बराबर अवसर हो, पुरुषको खोसेर हामीलाई देऊ भनेको हैन।’
बर्मेली भाषामा उदाहरणलाई ‘उपमा’ भन्छन्। संस्कृतबाट आमन्त्रित शब्द।
नन्दुले उपमा दिइन्, 'मानौं मेरा बालाई खाना पकाउन रुचि छ। मीठो पनि पकाउनुहुन्छ। आमालाई रुचि छैन। तर, हामीले यस्तो समाज बनाएका छौं, बाले खाना पकाउनुभयो भने खिसिट्युरी हुन्छ। अचम्म हुन्छ। आमाले ‘खाना पकाउन रुचि छैन, म पकाउन्न’ भन्नुभो भने खिसिट्युरी हुन्छ। अचम्म हुन्छ। हो, यस्ता दैनिक जीवनका स-साना चिज परिवर्तन गर्नुपर्छ। यसले पुरुषलाई पनि फाइदा गर्छ।'
नन्दुले फेरि अर्को उपमा थपिन्, ‘मेरा भाइलाई सिंगारपटार गर्न मनपर्छ। घरको काम गरेर घरै बस्न मनपर्छ। बाहिर काम गर्न मनपर्दैन। तर, मलाई सिंगारपटार मनपर्दैन। बाहिरफेर काम गर्न मनपर्छ। हामी त्यहीँ समस्या देख्छौं। यसले त पुरुषलाई परिवारका लागि कमाउनैपर्छ। परिवार पाल्नैपर्छ भनेर कस्तो दबाब पर्छ। हामीले त्यही हटाउन खोजेको हो। आ-आफ्नो रुचिअनुसार महिला-पुरुषले काम गर्न पाउनुपर्छ। त्यसमा सामाजिक, कानुनी केही विभेद हुनुभएन।’
मेरो साथीले बुझेझैं गरी टाउको तल-माथि गर्‍यो। नन्दुले मलाई आफ्ना कुरा उल्था गरी सुनाइन्।
'यो संसारले छोरी मान्छेलाई अर्कै तरिकाले देख्छ। रेस्टुरेन्टमा सँगै गयो भने केटा मान्छेलाई ‘ग्रिट’ गर्छ। केटीलाई गर्दैन,' नन्दु हामीभन्दा पहिले रेस्टुरेन्टमा पुगेकी थिइन्। हामीलाई ढोकैमा सुरक्षाकर्मीले हानेको सेल्युट सम्झेँ। सायद उनलाई सेल्युट गरेको थिएन कि?
'बर्मामा पनि ‘मी टु’ अभियान चलेको छ है,' मैले उनको सहमति खोजेँ।
‘दुई साताअघि यहीबारे बोल्नुपरेको थियो,’ उनले जर्मन संस्थामा मी टु अभियानबारे बोलेको समाचार मैले पत्रिकामा पढेको थिएँ।
‘यहाँ पनि गत वर्ष सुरु भयो। तर महिलाको भोगाइ, तिनका पीडा, व्यथा सुनिन्छ मात्र। विश्वास गरिँदैन,’ नन्दुले थपिन्, ‘कुनै महिलाले ममाथि बलात्कार भएको थियो भनिन् भने 'अहिले किन भनेको? पहिला किन नभनेको?' जस्ता प्रश्न सोध्छन्। अरूखाले दुर्व्यवहारबारे त के कुरा गर्नु?’
‘आफ्नो पीडा, भोगाइ महिलालाई मन लागेको बेला भन्ने छुट पनि छैन। भनिहालियो भने 'तँ त्यो बेला किन त्यहाँ थिइस्, किन पुरुषसँग थिइस्, के लगाएर गएकी थिइस्, किन बियर खाएकी थिइस्' भनेर झाँको झारिन्छ। त्यही प्रश्न पुरुषलाई किन सोध्दैनन्?’ नन्दुले यस्तरी सोधिन् मानौं त्यो प्रश्नको उत्तर मैले दिनुपर्ने हो। र, आँखा ठूलो पार्दै भनिन् ‘त्यही भएर म महिलावादी भएँ।’
बर्मेली साथीले टाउको हल्लाइरहेको थियो।
‘हाम्रो भाषा नबुझे पनि यसले भाव बुझिरहेको छ,’ म गमिरहेको थिएँ।
हुन त नन्दुले अंग्रेजी पनि निकै मिसाएकी थिइन्। हामी नेपालीभाषीलाई जाँड खाँदा मात्र होइन रिस उठ्दा, उत्तेजना आउँदा पनि अंग्रेजी शब्द अलि बढी मुखमा आउने हो कि?
'म सानै हुँदाको कुरा। मित बुढा बा भनेर चिनिने एक जना ६० कटेका पुरुष हाम्रो घर आउँथे। मलाई समातेर माया गरेजस्तो गर्थे। मन नपर्ने ठाउँमा छुन्थे। मलाई घृणा लाग्थ्यो। आमालाई गुनासो गर्थेँ। आमाले गुनासो सुन्नुहुन्थेन। ‘तँलाई कति माया गर्नुहुन्छ’ भन्नुहुन्थ्यो। तिनले मलाई ११-१२ वर्षको उमेरसम्म ‘मोलेस्टेसन’ गरे,' एउटा सम्मेलनमा उनले सुनाएको त्यो अनुभव समाचार बनेर आएको थियो।
मैले त्यस घटनाबारे सोधेँ।
‘उनी मरेर गए। मैले माफी दिएकी छैन,’ नन्दुले थपिन्, ‘नजानीकन हाम्रा परिवारका सदस्यले हामीलाई सानै उमेरदेखि यौन प्रताडना सहन बाध्य बनाउँछन्। सानोमा भन्दा कसैले नसुनेपछि बिस्तारै गुनासो गर्न छाडिन्छ। त्यसले महिलालाई जे भए पनि सहेरै बस्नुपर्छ भन्ने बानी पर्छ। अझ कतिपटक त सानोमा गुनासो गर्दा कारबाही हुन्छ। अनि आवाज सधैं दबेर जान्छ।’
नन्दुले अरूलाई पनि बोल्न सजिलो होस् भनेर ‘मी टु’ अभियानकै क्रममा आफ्नो विगत सम्झेको बताइन्।
‘यौन दुर्व्यवहारमा जो पनि पर्न सक्छ। त्यसबारे जहिले पनि बोल्नपर्छ भन्ने बर्मामा सिकाउनु छ,’ नन्दुले थपिन्, ‘हाम्रो संस्कृतिमा पीडितलाई कमजोर देखाउने चलन छ। मलाई त्यसको उल्टो प्रमाणित गर्नुछ। यौन दुर्व्यवहार हुने महिला कमजोर भएर हैन। ‘स्ट्रङ वुमन’ पनि हिंसामा, दुर्व्यवहारमा पर्न सक्छन्। त्यसैले हामी महिला बोल्न छाड्न हुँदैन।’
एक अर्को लेखनमा नन्दुले १४ वर्षको उमेरमा स्कुलबाट घर फर्किँदा आफ्नै घरमा शरण दिएको एक अधबैंशे पुरुषले गरेको दुर्व्यवहारबारे लेखेकी छन्।
‘उसले मलाई देखाएर हस्तमैथुन गर्‍यो। त्यो घटनाले धेरै रातसम्म म सुत्न सकिनँ। कतै घरमा एक्लै हुँदा वा राति त्यो पुरुषले बलात्कार गर्छ कि भन्ने डर भइरह्यो। उसले मलाई केही गरिहाल्यो र अरूलाई मैले भनेँ भने पत्याउलान् कि, के भन्ने हुन् भन्ने पीर लागिरह्यो। मैले आमालाई भनेँ। तर, आमाले कहिल्यै त्योबारेम ऊसँग कुरा गर्नुभएन,’ लेखनको सुरुआत यस्तो छ।
नन्दुको प्रश्न छ, ‘यस्ता घटनाले किशोरीको मनस्थितिमा कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर किन कोही बुझ्दैनन्?’
'पछि आमाले बुझ्नुभयो। कतिले ‘किन छोरीलाई यस्तरी बोल्न, जताततै हिँड्न स्वतन्त्रता देकी छस्’ भन्दाभन्दै उहाँले अवरोध गर्नुभएन। र, म यत्ति बोल्न सक्ने भएँ, लेख्न सक्ने भएँ। हाम्री आमाजस्तै सबै आमाबालाई बुझाउन अहिले म लागिरहेकी छु,’ नन्दुलाई कतै आफ्नी आमाबारे पाठकलाई नराम्रो छाप पर्ने हो कि भन्ने डर छ।
बर्मामा महिलावादी साहित्यको प्रचारप्रसार गर्न सजिलो होस् भनेर पोहोर ‘पर्पल फेमिनिस्ट ग्रुप’ स्थापना गरेकी छन् नन्दुले। दोस्रो किताबमा काम गरिरहेकी नन्दुको नयाँ किताबले छोराछोरीलाई कसरी समान बनाएर हुर्काउने भनेर सिकाउनेछ।
‘महिलावादी किताब नेपालीमा अनुवाद नगर्ने,’ प्रश्नमा नन्दुले आफ्नो नेपाली राम्रो नभएको भन्दै तर्केलिन् भन्ने सोचेको थिएँ। उनी त हौसिइन् पो, ‘नेपालीमा पनि उल्था गर्ने हो, मेरो नेपाली भाषा सम्पादन गरिदिने मान्छेको खाँचो छ। तपाईं गर्दिनुहुन्छ?’
कुनै संस्थाले सहयोग गरे नेपालमा किताब निःशुल्क बाँड्ने उनको मन रहेछ।
‘नेपाली महिलाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरू राम्रो आउँदैनन् नि,’ नन्दुलाई छाउपडीका समाचारले दिक्दार बनाउँदो रहेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा सुनेका र बर्मेली नेपालीको घरपरिवार देखे-भोगेको आधारमा महिला हिंसा बर्मामा भन्दा नेपालमा धेरै छ कि जस्तो लाग्छ नन्दुलाई।
नेपाल र बर्मा दुवैको गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक हेर्दा गत वर्ष बर्मामा १४०५ वटा बलात्कारका घटना दर्ता भएका छन्। नेपालमा त्यही समय १५ सय बलात्कार र सात सय बढी बलात्कार प्रयासका उजुरी परेका छन्। पटक-पटक गरिएका अनुसन्धानबाट दुवै देशमा महिला हिंसा र यौन दुर्व्यवहारका हजारौं घटना प्रहरीसम्म नपुग्ने प्रस्ट देखिन्छ।
नन्दु ज्ञवालीलाई नेपाल जाने मन छ। उनका पूर्खा कहाँबाट बर्मा आए, थाहा छैन। तर, हजुरआमाको दिदी हेटौंडामा हुनुहुन्छ भन्ने थाहा छ। शान प्रदेशको मान्साङ गाउँमा जन्मेकी नन्दुको नेपाली भाषा अन्यत्रका नेपालीभाषीको भन्दा कमजोर छैन। उनको गाउँमा ५० घर नेपाली छन्। अरु एक सय जति घर चिना, शान र टान समुदायका छन्।
नेपाली भाषा जोगाउनै भनेर स्कुलको तीनमहिने गर्मी बिदामा नेपाली भाषा पढाइ हुन्छ।
‘हाम्रो गाउँका सबै घरमा नेपाली नै बोल्छन्,’ नन्दुलाई मैले उनको नेपाली भाषाबारे सोधेको थिएँ, ‘हामीले नेपाली भाषालाई महत्व दिएका छौं। गाउँमा नेपाली बोल्न प्रोत्साहन गरिन्छ।’
‘नेपाल कहिले जाने हो त?’ मेरो यो प्रश्न पनि बर्मेली नेपालीलाई सोध्दासोध्दा भुत्ते भइसक्यो। तर, सोध्न छाडेको छैन।
उनले भनिन्, ‘यो २०१९ मा जसरी पनि जाने हो। धेरै योजना बनाएर जान खोज्यो भने के-के झ्याङ्लो आएर गइँदो रैनछ। अब पैसा जम्मा हुनासाथ नेपालको टिकट काट्ने हो।’
(यो लेख पहिलोपट सेतोपाटी अनलाइनमा आईतबार, पुस २९, २०७५ मा प्रकाशित भएको थियो।)
नेपालीभाषी बर्मेलीका धर्म र समाजका कुरा
‘दुई-चार घर मात्र भएका ठामका नेपालीले पनि सयौं असजिलो, दुःख, अपमान सहेरै हाम्रो भाषा, संस्कृति जोगाएर राखेका छन्। त्यो देखेपछि त्यसै आँशु रसाउँछ के भाइ!’
सधैं हँसमुख देखिने सागर घिमिरेका आँखामा पानी छचल्किएको हो कि भनेर मैले गहिरिएर हेरेँ। उनको स्वर मात्र कामेको थियो, आँखामा आँशु थिएन।
बर्मामा बस्ने नेपालीभाषीको साझा संस्था अखिल म्यान्मा देशीय गोर्खा हिन्दु धार्मिक संघका अध्यक्ष हुन्, घिमिरे। घिमिरेको टोली म्यानमारका ‘छिन’, ‘जघाई’ र 'शान' प्रदेश पुगेर भर्खरै यांगुन फर्किएको थियो। यीमध्ये छिन र जघाईमा नेपालीभाषीका थोरै थोरै बस्ती छन् भने शानमा बाक्लै छ।
म्यानम्यार नेपालभन्दा करिब पाँच गुणा ठूलो छ। जनसंख्या भने नेपालको भन्दा दोब्बर पनि छैन। बस्ती जताततै फैलिएको छ। एक लाख हाराहारी नेपालीभाषी पनि गाउँगाउँमा बाँडिएर बसेका छन्। सरकारी तथ्यांकले नेपालीभाषीको संख्या ९० हजार पनि देखाउँदैन। नेपालीभाषी अगुवाहरू भने म्यानमारमा सवा लाखभन्दा धेरै नेपालीभाषी रहेको बताउँछन्।
यहाँका रैथाने र अन्य जातिसँग बिहेबारी, थाइल्यान्डसहित विभिन्न देशमा बसाइसराइँ र धर्म परिवर्तनपछि भाषा संस्कृति विस्तारै बिर्संदै र छाड्दै जाँदा नेपालीभाषीको जनसंख्या कम हुँदै गएको छ।
संघका नेताहरू वर्षको एकपटक गाउँगाउँ पुगेर नेपालीभाषीका खैखबर गर्छन्। कसैलाई दुःख भए संघमार्फत् सघाउँछन्। कसैको सुख भए संगालेर फर्किन्छन्। अनि त्यो समाचार अन्त बसेका नेपालीभाषीसम्म फैलाउँछन्।
‘संघले बर्सेनि हजारौं विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन्छ, स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्छ। मन्दिर, पाटी, पौवाहरू बनाउन सहयोग गर्छ। यहाँका नेपालीभाषीलाई म्यानमाली नागरिकता दिलाउन मद्दत गर्छ। यहाँका नियम-कानुनबारे जानकारी दिने, युवाका लागि व्यक्तित्व विकास, महिलाका लागि नारी शिक्षाका कार्यक्रमजस्ता चेतनामूलक शिविरहरू गर्छ। यी सबै विषयमा जानकारी दिन पनि गाउँगाउँ जानुपर्छ,’ संघका महासचिव विष्णुबहादुर मरासिनी भ्रमणको कारण खुलाउँदै थिए।
अखिल म्यान्मा देशीय गोर्खा हिन्दु धार्मिक संघका अध्यक्ष सागर घिमिरे र कार्यालय प्रमुख तिलकराम पोख्रेल। तस्बिर सौजन्य: तिलकराम पोख्रेल
मलाई भने गाउँगाउँका नेपालीभाषीको कुन कुराले उनीहरूलाई उत्साहित बनायो, के कुराले दु:खी बनायो जान्ने उत्सुकता थियो।
‘फलाम सहरबाट १० किलोमिटर उत्तरमा जम्मा तीन घर रहेछ, गोर्खालीको। १७ जना नेपालीभाषीले पनि मन्दिर जोगाएर राखेका रैछन् दाइ,’ संघका कार्यालय प्रमुख तिलकराम पोख्रेलले अिघ सर्दै सुनाए, ‘बेलायती शासकले उपलब्ध गराएको जग्गामा एक सय १८ वर्षपहिले नेपालीले बनाएको मन्दिर पुगियो। बाहिरबाट ढल्न लागे पनि भित्र शिव र पाञ्चायन मन्दिरमा देवी-देवताका प्रतिमूर्ति मखमली र सयपत्री फूलले सिँगारिएका थिए।’
करिब पाँच लाख जनसंख्या भएको छिन प्रदेशमा ९० प्रतिशत बासिन्दा क्रिश्चियन धर्म मान्ने भइसके। अंग्रेजले सन् १८८५ मा छिन कब्जा गर्नुअघि त्यहाँका सबैजसो बासिन्दा प्रकृतिपूजक थिए। क्रिश्चियन धर्म प्रचारकहरू भेटिइरहने छिनमा सन् १९६६ को जनगणनाले जम्मा ३५ प्रतिशत क्रिश्चियन धर्मावलम्बी भएको देखाउँछ।
तिलकरामले ८२ वर्षीय बेदुरामलाई छिनको फलाममा भेटेछन्।
‘धर्म प्रचारकहरूले नर्कबाट बचाइदिन्छौं, विदेश लैजान्छौं, जागिर मिलाइदिन्छौं, पैसा दिन्छौं भनेर नेपालीभाषीहरूलाई क्रिश्चियन बनाएका रहेछन्। बेदुरामका छोरालाई पनि क्रिश्चियन बनाएर नर्वे लगेछन्। बेदुरामलाई पनि नाति/नातिनीका मायाको बल्छी थापेर उता लान खोजेका रहेछन्,’ तिलकरामले बर्मेली बेदुरामका कुरा सुनाए पनि मलाई भने आफ्नै देशको कथा म्यानमारमा कसैले भनिरहेझैं लागिरहेको थियो।
'बेदुराम बुबा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी भनी बस्नुभएको रहेछ। भन्नुहुन्थ्यो- अंग्रेज-जापान लडाइँ, बर्मा-छिन लडाइँ बेला भारत गएर बसे पनि युद्ध सकिनासाथ यहीँ फर्केको हुँ। अब स्वदेशमै मर्छु,' तिलकरामले सुनाए।
नेपालीको त्यो मन्दिर त्यहाँबाट हटाउन छिनबासीले अनेक प्रपञ्च गरेछन्। कहिले ‘तिमीहरूको मन्दिर हटाएर सहर बाहिर लैजाओ, भनेजति जग्गा दिन्छौं’ भन्ने। कहिले बजार भाउभन्दा असाध्यै धेरै पैसा दिएर किन्न खोज्ने। कहिले डर देखाएर हडप्न कोशिस गर्ने।
यतिले नपुगेर बेलाबेला मन्दिर लडाउन र आगो लगाउन पनि खोजिएछ। बेदुराम र अन्य गोर्खालीले ‘बरु हाम्रो गर्दन काटेर लैजाओ, तर हाम्रा पुर्खाले बनाएको, सय वर्षदेखि पूजा गर्दै आएको मन्दिर हामी दिन सक्दैनौं’ भनेपछि अहिलेसम्म बाँचेको रहेछ।
बेदुरामका कुरा सम्झँदै तिलकरामले भने, ‘जीवन दाउमा राखेर मन्दिर बचाएका छौं। यही मन्दिर देखेर भए पनि गोर्खालीका सन्तानले आफ्ना संस्कृति सम्झेका छन्। हाम्रा चाडपर्व यहाँ मनाउन पाइएको छ। यो मन्दिर नरहे नेपाली कहाँ भेला होलान्? होटलमा शिवरात्रि, ऋषिपञ्चमी, रक्षाबन्धन मनाएर हाम्रो संस्कृति जोगिएला?’
‘हामीले अब त्यो मन्दिर जिर्णोद्धार गर्ने हो,’ कुइनोले टेबलमा अडेस लगाएर टाउकोमा हात राखी गमिरहेका अध्यक्ष घिमिरे बोले, ‘अब दुई वर्षभित्र त्यहाँ राम्रो मन्दिर बन्छ।’
म्यानमारको ल्वेका सहरमा भेटिएका नेपालीभाषी
छिन प्रदेशको फलामसँगै घिमिरे टोली जघाई प्रदेशको कले पनि पुगेको थियो। त्यहाँ २ सय २० घर नेपालीभाषी रहेछन्। कलेमा नेपालीभाषीहरू बौद्धमार्गी हुँदै गएका भेटेछन्।
म्यानमारमा अन्यत्र पनि थुप्रै नेपालीभाषी बौद्धमार्गी भएका भेटिन्छन्। चाहे नेपालीभाषीको बाक्लो बस्ती रहेको मोगोकमा होस् वा पुरानो राजधानी यांगुनमा वा दुई सय घर भएको ल्वाइको सहरमा। त्यहाँ गोर्खाली स्तुप र विहार बनिरहेका छन्, बढिरहेका छन्।
अखिल म्यान्मा देशीय गोर्खा थेरावाद बुद्ध धर्म प्रचारप्रसार संघका अनुसार म्यानमारमा ४० भन्दा धेरै बौद्ध स्तुप र विहार गोर्खालीहरूले निर्माण र सञ्चालन गरिसकेका छन् भने थप बन्दै छन्।
‘हामी मलाइ पुगेका थियौं, एकदमै दुर्गम गाउँमा। २२ जना नेपालीभाषी भेला हुनुभएको थियो,’ घिमिरेले थपे, ‘नेपाली भाषा पढाउने कोशिस गर्दा जम्मा दुई जना पढ्न आए भन्ने सुनियो। पढाउने मान्छे पनि अभाव रहेछ। तै पनि नेपालीपन उहाँहरूले छाड्नुभएको छैन।’
जघाई प्रदेशको राजधानी टमुमा भने गोर्खाली धर्मशाला छ। भारतीय सिमाना नजिकको टमु सहरमा नेपालीभाषीहरूले व्यापारबाट प्रशस्त आम्दानी गरेका छन्। टमुको नाम्फालौ मन्दिरमा हरेक औंशीपूर्णेमा गोर्खालीको भण्डार लाग्दो रहेछ। सयौं बर्मेलीले गोर्खालीको दालभात सित्तैमा खाँदा रहेछन्। तिहारमा टमुका नेपालीभाषीहरू मिलेर देउसी-भैलो खेलेछन्।
संघका महासचिव मरासिनीलाई मैले सोधेँ, ‘देशैभर घुम्दा तपाईं नेपालीभाषीको स्थिति कस्तो पाउनुहुन्छ? पहिले र अहिले के परिवर्तन भएको छ?’
‘म ६४ वर्षको भएँ। १५-२० वर्षअघिसम्म नेपालीभाषीहरू दुःखी तरिकाले बसेका देखिन्थे। खेतीपाती, पशुपालनमा निर्भर थिए। अहिले त परिवर्तन भयो। नेपालीभाषीहरू पनि ठूला साना सबैखाले व्यापार व्यवसायमा लागेका छन्। गाउँमा बसे पनि राम्रा घर छन्, शौचालय बनाएका छन्। गाडी, साइकल किनेका छन्। दुःख गर्ने नेपाली कम्ति हुँदैछन्। मैले त प्रगति नै देखेको छु,’ उनले भने।
मरासिनीले थपे, ‘कोही नेपालीभाषीले पैसा नभएर पढ्न छाड्न पर्दैन, डाक्टर इन्जिनियर, पिएचडी जे पढ्न मन छ संघले पढाइदिन्छ। हामीले चार हजारभन्दा बढी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएका छौं। बर्सेनि तीन करोडभन्दा धेरै त छात्रवृत्तिमै खर्च हुन्छ।'
टमुका नेपालीभाषीहरूमाझ अखिल म्यान्मा देशीय गोर्खा हिन्दु धार्मिक संघका पदाधिकारी। तस्बिर सौजन्य: तिलकराम पोख्रेल
तीन-चार घर मात्र नेपालीभाषी रहेको फलामको सात माइलस्थित नेपाली मन्दिर। तस्बिर सौजन्य: तिलकराम पोख्रेल
मैले फेरि भ्रमणमै जोड्न चाहेँ।
त्यसै पनि तालुको कपाल झरेर निधार ठूला भएका घिमिरेले भुमरीबाट क्रमश: कपाल खुइलिँदै गएको टाउको उठाउँदै भने, ‘हाका भन्ने सहरमा तीन घर मात्र नेपालीभाषी रहेछन्। त्यो पहाडी भूभागमा सन् १९६२ अगाडि बाक्लै नेपालीभाषी भए पनि सैनिक शासन सुरु भएपछि मानिसहरू समथरतिर बसाइँ सरेछन्।’
उनले फेरि दोहोर्याए, ‘जति छन्, तिनले आफ्नो परम्परा जोगाएर राखेका छन्।’
अनि मलाई प्रश्न गरे, ‘लौन नेपाली परम्परा जोगाएर राख्नेलाई कसरी सम्मान गर्ने होला, हाम्रो संघको मात्र पैसाले त के के मात्र गर्ने हो र? नेपाली धर्म, संस्कृति, परम्परा जोगाउन कुनै आइएनजिओले सहयोग गर्दैन भाइ?’
सधैंझैं यसपटक पनि अप्ठ्यारो प्रश्नको जवाफ मैले फिसिक्क हाँसेर मात्र दिएँ।
समाजसेवामै करोडौं खर्च गरेका घिमिरे बढी नै उद्वेलित देखिए, ‘मैले गरेको समाजसेवा त केही पनि होइन। सयौं बाधा, अवरोध, अपजस, हेला सहेर पनि दुर्गम क्षेत्रमा रहेका मन्दिर, भाषा, परम्परा हाम्रा दाजुभाइ, दिदीबहिनीले जोगाएका छन्। तिनले हाम्रो संस्कृति जगेर्नामा गरेको दुःखलाई खोई कसरी सम्मान गर्ने हो? कसले हो तिनलाई सम्झनुपर्ने?’
मैले घिमिरेलाई थप भावावेशमा ल्याउने चाहेँ। सोधेँ, ‘हिजोआज बर्माका गाउँ-सहर जता घुम्दा पनि धर्म परिवर्तन गर्ने गोर्खालीहरू प्रशस्तै भेट्छु। त्यसले त तपाईंले भनेजस्तो नेपाली संस्कृति, परम्परा मासिन्छ जस्तो लाग्दैन?’
‘लाग्नेहरू विभिन्न धर्ममा लागेका छन्, तर कतिले त आफ्ना परम्परा सम्हालेर पनि राखेका छन् नि,’ दुई आँखीभौंका बीचमा गाँठो पारेर एकछिन सोचेपछि घिमिरे हल्का मुस्कानसाथ बोले, ‘अब हाम्रो अखिल म्यान्मा देशीय गोर्खा हिन्दु धार्मिक संघको प्रमुख नारा भनेकै गोर्खालीले जुन जुन धर्म अपनाए पनि, जे जति संस्थाहरू बनाए पनि सबै मिलेर गोर्खाली परम्परा र संस्कृति बचाउनुपर्छ भन्ने हो। हाम्रो संस्कृति नरहे, हाम्रो परम्परा नबचे हामी रहँदैनौं।’
नेपालका जो ‘ठूलाबडा’ भनिनेहरू आउँदा पनि नेपाली भाषा, संस्कृति जोगाएर राखेको भन्दै लाख लाख बधाई पाइरहेका घिमिरेलाई असजिलो पो पर्ने हो कि भन्दै मनमा एकछिन गमे पनि मैले नसोधी रहन सकिनँ, ‘नेपाली भाषाको स्थिति चाहिँ कस्तो पाउनुभयो त? म गाउँ-सहर जाँदा त नयाँ पुस्ताले कमै नेपाली बोलेको पाउँछु।’
बर्सेनि स्कुल छुट्टी हुने गर्मीका तीन महिना संघले सञ्चालन गर्ने सयौं नेपाली पाठशालाको उदाहरण दिँदै घिमिरेले थपे, ‘हो, हामीले नेपाली भाषा जोगाउनुपर्ने छ। जहाँ जहाँ गोर्खाली बस्ती छ, त्यहाँ त्यहाँ गर्मीको छुट्टीमा नेपाली पाठशाला सञ्चालन गरी नेपाली भषा जोगाउने अथक प्रयास गरिरहेका छौं। जहाँ जहाँ गोर्खाली जन कम छन्, त्यहाँ भाषा बिग्रँदै गएको छ। टुटेफुटेको नेपाली बोल्नेहरू बढ्दै छन्। कति ठाउँमा बिर्सेका पनि छन्।’
बर्मामा पढाइ हुने नेपाली भाषालाई भाषिक परीक्षा लिएरै भए पनि नेपाल सरकार वा विश्वविद्यालय कतैबाट मान्यता दिए बर्मामा भाषा जोगाउन सजिलो हुने घिमिरेले आकलन गरे।
‘जसरी अंग्रेजी भाषाको आइइएलटिएस, टोफलजस्ता परीक्षा हुन्छन्, नेपाली भाषाको पनि त्यस्तै परीक्षा होस् र ती परीक्षार्थीले नेपालबाट आधिकारिक प्रमाणपत्र पाऊन्। त्यसका आधारमा नेपालमा थप अध्ययन गर्न चाहने बर्मेली विद्यार्थीलाई अवसर मिलोस्,’ घिमिरेले भने, ‘नेपालका विश्वविद्यालयहरूले केही नेपालीभाषी बर्मेलीलाई उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति दिए यहाँ नेपाली भाषा र संस्कृति जगेर्नामा थप सहयोग पुग्थ्यो।’
बर्मेली नेपालीभाषीहरू नेपाली टोपी ग्रहण गर्दै। तस्बिर सौजन्य: तिलकराम पोख्रेल
मलाइ निवासी नेपालीभाषीहरूको भेला। तस्बिर सौजन्य: तिलकराम पोख्रेल
घिमिरे नेतृत्वको टोली जघाई र छिनपछि म्यानमारको सबैभन्दा ठूलो प्रदेश शान पुगेको थियो। पहाडी भूभाग भएको शानको भौगोलिक बनौट नेपालका पहाडसँग मिल्छ। यांगुनमा अहिले ३५ डिग्रीको गर्मी हुँदा शान १५ डिग्रीको चिसो छ।
लाश्यो सहरमा गएका टाउकेहरूले नेपालीभाषीको न्यानो स्वागत मात्र पाएनन्, केही अप्ठ्यारा प्रश्न सामना पनि गर्नुपर्यो। बर्मेली नेपालीहरू नेतालाई 'टाउके' भन्छन्।
सबैभन्दा धेरै सोधिने प्रश्न त उही हो, किन नेपाली नभन्ने? किन गोर्खा भन्ने? वा, ठ्याक्कै त्यसको उल्टो।
‘बर्मेली भाषामा हामी गोर्खा नै हौं। नेपाली भनेर कसैले चिन्दैन,’ घिमिरे भन्दै थिए, ‘संघको दोस्रो महासभाले पितृभाषा नेपाली भए पनि गोर्खा भन्ने नामबाटै हाम्रो परिचय खुल्ने भएकाले गोर्खा शब्द प्रयोग गर्ने विधान पारित गरेको छ।’
नेपाली मातृभाषा मात्र सुनिरहेको मलाई ‘पितृभाषा’ शब्दले रमाइलो लाग्यो। नेपालीभाषी बर्मेलीहरू म्यानमारलाई मातृभूमि र नेपाललाई पितृभूमि भन्छन्।
अर्को विवाद अगाडि आयो, उत्तरी शानमा रहेका नेपालीले बनाएको दुर्गा मन्दिर प्रांगणमा बौद्धमार्गी नेपालीभाषीले दुर्गा माताको जत्रै गौतम बुद्धको प्रतिमा पनि राख्न पाउनुपर्छ भने।
‘हरेक नेपाली मन्दिरमा बुद्धको मूर्ति राखिएकै छ त। हामीले उतिनै सम्मानका साथ बुद्धलाई मान्दै, पुज्दै आएका छौं। किन हिन्दु मन्दिरमा हिन्दु देवीदेवताका जत्रै बुद्ध मूर्ति चाहिने,’ एक जना बुज्रुकले प्रश्न गरे।
‘हामी पनि नेपाली हौं, हाम्रा पुर्खाले बनाएका मन्दिरमा हाम्रो पनि उत्तिकै अधिकार होला। बुद्धको प्रतिमा अझ ठूला बनाउँदा गोर्खालीको इज्जत बढ्छ कि घट्छ?’ अर्को प्रश्न फेरि थपियो।
‘नेता हुन नि कति कठिन छ है,’ दुवैको प्रश्न सुनेपछि म सोच्दै थिएँ।
अहिले बर्मामा नेपालीभाषीले विभिन्न जातीय र फरक धर्मका संगठन खोल्ने चलन सुरु भएको छ। नेपालीभाषीका फरक-फरक संस्था बने सबै नेपालीभाषीको साझा थलो संघको भविष्य के पो हुने हो भन्ने चिन्ता उत्तिकै छ।
मलाइमा नेपालीभाषीको घर। तस्बिर सौजन्य: तिलकराम पोख्रेल
मलाइमा नेपाली पाठशाला भवन। तस्बिर सौजन्य: तिलकराम पोख्रेल
अध्यक्ष घिमिरे ‘धार्मिक विषयमा संघ तटस्थ बस्ने हो’ भन्छन्। बरु अखिल म्यान्मा देशीय गोर्खा थेरावाद बुद्ध धर्म प्रचारप्रसार संघ, किराँत गोर्खा साहित्यिक एवं साँस्कृतिक संघ, नेवारी संघ, तामाङ संघ, गुरूङ संघ, मगर संघ, विश्वकर्मा संघ, थापा-मगर संघ र अन्य संघहरूलाई अखिल म्यान्मा देशीय गोर्खा हिन्दु धार्मिक संघको छातामुनि संगठित गरेर आ-आफ्ना गतिविधि गर्ने र गोर्खालीका लागि सामूहिक आवाज संघमार्फत् उठाउनुपर्ने उनको तर्क छ।
‘यी सबै संघहरूको सहकार्यमा युवा सम्मेलन, महिला सम्मेलन, साहित्यिक कार्यक्रमजस्ता गतिविधि गर्ने हो,’ घिमिरेले सम्झाउँदै थिए, ‘नागरिकता वितरण, छात्रवृत्ति सञ्चालन, गोर्खा जातिलाई परेका समस्याबारे संघबाट सबै गोर्खालीको एउटै आवाज गराउनुपर्छ।’
‘संघको नामै परिवर्तन गर्ने हो कि?’ मैले सोधेँ।
बर्मामा बस्ने नेपालीभाषीको साझा संस्थाको नाम ‘अखिल म्यान्मा देशीय गोर्खा हिन्दु धार्मिक संघ’ भन्दा सुरु सुरुमा मलाई पनि खसखस भएको थियो। कारण- बर्मेली नेपालीभाषीमा २० प्रतिशतभन्दा धेरै अहिले बौद्धमार्गी छन् र माथि भनेझैं त्यो बर्सेनि बढ्दै छ। नेपालमा झैं म्यानमारमा पनि हिन्दु र बौद्धमार्गीहरू धर्म परिवर्तन गरी क्रिश्चियन बनेका भेटिन्छन्। नेपालीभाषीको मात्र पनि चर्च छ।
धर्म नमान्ने नेपालीभाषी पनि होलान्। हिन्दु धार्मिक संघले ती सबै नेपालीभाषीको प्रतिनिधित्व गर्ला कि नगर्ला? फेरि म्यानमार नलेखेर ‘म्यान्मा’ किन लेखेको होला नाममा?
‘सैनिक शासन बेला धार्मिकबाहेक अरू संघ-संस्था प्रतिवन्धित भएकाले संस्थाको नाम हिन्दु धार्मिक संघ भएको हो। त्यति बेला सबैजसो नेपालीले हिन्दु धर्म नै मान्थे,’ सन् १९८२ मा संघ स्थापना गर्दाको इतिहासबारे बताउँदै महाचिव मरासिनीले भने, 'नेपालीलाई यहाँ गोर्खा भनेरै चिन्छन्। त्यसैले त्यो बेलादेखि नै गोर्खा राखियो।'
फलाम सहरस्थित शिव मन्दिरको शिलालेख। तस्बिर सौजन्य: तिलकराम पोख्रेल
नाममा भएको म्यान्माबारे त बस्दै गर्दा मैले नै पत्ता लगाइसकेको छु, बर्मेली उच्चारणमा ‘र’ को ठाउँ रहेनछ। त्यसैले बर्मेलीले म्यानमारलाई ‘म्यान्मा’ भन्छन्। नेपालीभाषीले त्यही टिपे।
र, अर्को कुरा, विवाद भइनै रहे पनि नामको सुरुमा भएको ‘अखिल’ ले अर्थ्याउने ‘समस्त’ जस्तै अहिलेसम्म सबै नेपालीभाषी बर्मेलीको साझा संस्था अखिल म्यान्मा देशीय गोर्खा हिन्दु धार्मिक संघ नै छ। दुःखसुख बाँचेका हजारौं नेपालीभाषीलाई यसैले जोडेको छ।
मलाई ‘टाउके’ हरूको कुरा सुन्दा रमाइलो लागिरहेको थियो। कार्यालय प्रमुख तिलकराम पोख्रेल भने हतारमा देखिए।
‘उसको बिहे छ कि, यही मंसिर २९ गतेको लग्नमा, त्यसैले छट्पटिएको छ, नयाँ दुलाहा हुने बेला कस्तो हुन्छ?’ घिमिरे बल्ल आफ्नो लयमा फर्के।
त्यहाँबाट छुट्टिएको केही दिनपछि नेपालीभाषी ‘टाउके’ का भ्रमणको फोटो पठाउन मैले तिलकरामलाई फोन गरेँ। सुरुमा ‘बिहेको बधाई छ है भन्दै।’
‘दाइ, बिहे त सर्यो नि। मंसिर २९ गतेको लगन त भगवान राम-सीताको बिहे भएको लगन रहेछ,’ तिलकराम फोनमा बोल्दै थिए, ‘त्यो लगनमा बिहे गरे राम-सीताको जस्तै वर्षौं बिछोड हुन्छ भने पण्डितजीहरूले। अब माघ ४ मा हुन्छ दाइ बिहे।’
सानो स्वरमा तिलकरामले थपे, ‘तपाईं नेपालीको बिहेमा नबोलाइकन गएको पढेको थिएँ। मैले त बोलाएको छु। नेपालीहरूको बाक्लो बस्ती भएको मोगोक जाने हो जन्ती। नेपालीभाषी भेट्न रुचाउने तपाईंले चाहेजति भेट्न पाउनुहुन्छ। मेरो बिहेमा आउनुहोस् है।’
नेपालीभाषी बर्मेलीका कुरा।
यो लेख पहिलोपट सेतोपाटी अनलाइनमा आएको थियो। प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर २६, २०७५